Dzesviro – Page 3 – VanodaZvinhu
My name is Jocy and i recently moved to SA to stay with my sister and her husband. Accommodation is an issue for Zimbabweans in SA such that vaigara mu 1 bedroomed flat mune...
“So do you know of any place i could find a place to sleep,just for tonight?”…Ndakabvunza receptionist wepalodge nezwi rakadzikamira zvangu semunhu ainge aneta… October 2006 ,uri musi weChiShanu ndichibva paZed (paZambia) zvangu,,late in...
Ndakaita Apprentice in motormechanics ndika qualifier muna 2013 sezvatoziva ma basa anonetsa chaizvo muzimbabwe ndakatozama ku applyer kunaana toyota dulys kwese even kunaana museyamwa asi zvairamba.2014 yakunopera sekuru vangu hanzvadzi yaamai yandibata vakti mzaya...
I visited my friend in joburg and i happened to meet Nosipho the first day we went out and everything just sort of turn up side down. Handisati ndamboona mwana arifast zvakadai but atleast...
I have been married 10 years and i was almost in my late 30s, hanzi ladies don’t tell their real ages but isu vamwe we don’t care about that. So i was 36 years...
by DrSviro · Published February 16, 2016
I had just arrived kwazvakarehwa kuti kwainongwa mari mustreet, to my shock everything was hard. Ndakasangana naAnna, mukadzi aiva akanaka iyeye then you wonder why asina kuroorwa, she was about 35 aine mwana musikana...
Yedu yemababe epanet iyi. Ndakangowana iri friendly request pafacebook musi wa14 February pavalentine ipapo. Ini ndikati aika, yayipi iyi. Ndaka acceptor request iye. Ndopandakawana ndaisirwa kagift kerudo. Handina kutambisa mukana kana kunyenga ndakangotanga nekuti...
Victoria akapomerwa mhosva yekusateerera nasupervisor wake. SaHR manager ndakamudaidza kuoffice kwangu kuti azotora suspension letter yake. Akaitora ndokuenda ndokudzoka after 10 minutes zvikanzi Sir ndokumbirawo ruregerero, dambudziko rangu nderezemo, ndaane 3 months ndisina kumbosvirwa....
Ndaishanda parestaurant kuMidrand ndiri waiter hangu and there was murume aiuya everyday but ndainge ndisingazive zita rake. Aiyita kunge munhu anoshandira around nekuti aiwuya akapfeka worksuit achibva kubasa, ndaingoona munhu achinwa energy drink achiputa...
Ko ndaigodiiwo zvangu variivo vakazvitanga boss madam. Semunhu mukuru ndaigara ndichizvidzora zvangu and ndaiva nekamwe kamentality kaingo ringer mumusoro kuti “ko boss madam vakazojamuka”..At first zvaibhowa sei,kungogarotumwa kunotora vana vechikoro.I felt so humiliated everytime...